१ असार २०७६, आईतवार १०:४७
काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०६७/०७७ का लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघको बजेटले तोकेको सिलिङका आधारमा प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीलाई मूख्य प्राथमिकता.....
तनहुँका नौ पर्यटकीय क्षेत्रलाई केन्द्रीय सरकारको साढे तीन करोड बजेट
२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०८:५८
दमौली । केन्द्रीय सरकारले तनहुँका नौ पर्यटकीय क्षेत्रलाई तीन करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटअनुसार तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का विभिन्न पर्यटकीय योजनालाई उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने गरी व्यास.....
प्रतिनिधसभामा बजेटमाथिको छलफलः सत्तापक्षबाट बचाउ, प्रतिपक्ष सांसदबाट आलोचना
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १३:३४
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता.....
आत्मनिर्भर बन्न आयात रोक्दा राजस्व घट्यो : अर्थमन्त्री खतिवडा
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १८:५१
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै छौं । यो लगातार तेस्रो वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि हो । हामी योभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्न चाहन्छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छौं । चालू वर्षको संशोधित अनुमान साढे ४ प्रतिशत हो । अर्को वर्ष ६ प्रतिशत भनिएको छ, यो.....
रक्सी र चुरोटमा बढ्यो कर, कुनमा कति (सूचीसहित)
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १३:२८
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटले मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुमा कर बढाएको छ । बिहीबारदेखि मदिरा र सुर्तिसेवन गर्नेले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने छ । नेपालमा मदिरा तथा सुर्तिजन्य अधिकांश बस्तुहरु स्वदेशमा उत्पादनका अतिरिक्त विदेशबाट पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । त्यस्ता बस्तुको भन्सार.....
हरेक बजेटले उत्साहित बनाउँछ, तर कार्यान्वयनले निराश
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:२६
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आइसकेको छ । त्यसमा भएका विविध पक्षहरुमाथि टिकाटिप्पणी र बहस भइरहेका छन् । तर, बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुअघि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमि पनि हेर्न जरुरी छ । हामी कहाँ छौँ ? कसरी अगाडि बढ्दै छौँ ? भन्ने पक्षहलाई हेर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष.....
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुनचाँदीलाई पनि नगद जस्तै निक्षेपका रुपमा लिन पाउने
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:५९
काठमाडौं । नागरिकसंग भएको सुन,चाँदीलगायत बहुमूल्य धातु पनि अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमा नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको सुनचाँदी जस्ता वहुमूल्य धातुलाई निक्षेपको रुपमा.....
बजेटमा कुन वस्तुको मूल्य कति बढ्यो कति घट्यो ?
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:४०
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा केही वस्तु भन्सार दर बढेको छ, भने केही बस्तुको भन्सार दर भने घटाइएको छ । त्यस्ता वस्तुका भन्सार दर घट्दा र कम हुँदा वस्तुको मुल्यमा उतारचढाव भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित केही वस्तुको समेत मुल्य बढेको छ । विलासीताका वस्तुको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क कर बढाइएको.....
बजेट खर्च नहुँदाको असरः राजस्व संकलनमा असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक लक्ष्य घटायो
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:२७
काठमाडौं । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ । राजस्व संकलन घट्ने देखिएपछि सरकारले पुनः दोस्रोपटक लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब.....
विद्युत उत्पादन २४४५ मेगावाट पुग्ने, प्रतिव्यक्ति खपत २५० युनिट
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:००
काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा विद्युत उत्पादन थप भई २ हजार ४४५ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेका झण्डै ४३ ओटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप हुने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षसम्म जडित क्षमता विस्तार भई १ हजार ४१७ मेगावाट पुग्ने.....